Is rasaaseyn Maanta Xaafada Macmacaanka ku dhexmartay Ciidamo ka wada tirsan Dowlada KMG. – Puntland Voice
June 10, 2010 11:36 am Views: 30
Muqdisho (AB):-Wararka laga helayo Degmada Dharkeenley ayaa sheegaya in Maanta Xaafada Macmacaanka ee Degmadaasi ay isku fara sareen ciidamo ka wada tirsan Dowlada KMG Soomaaliya gaar ahaan ciidamada Maamulka degmadaasi.
Inta la ogyahay 3 qofood oo midi askarta Dowlada ka tirsanaa ayaa dhaawacyo ka soo gaareen is rasaseynta dhexmaratay Ciidamada Dowlada KMG eek u sugan Degmada Dharkeenley.
Wararka laga helayo dadka deegaanka ayaa sheegaya in ujeedka is rasaseyntu ahayd kadib markii labada dhinac midkood uu isku dayay inuu kooxda kale ka celiyo jidgooyo ay xaafadaasi shigeteen kaasoo baabuurta ay lacago baad ah uga qaadanayeen.
Gudoomiye xigeenka Maamulka Degmada Dharkeenley Yuusuf Kabaale ayaa saxaafada u sheegay in dagaalkaasi uu ahaa mid aan sidaa u weyneyn,islamarkaana uu ku saabsanaa sifeynta kooxaha amni darada ka shaqeeya ee meelaha qaar dhigta isbaarooyinka.
”meeha dagaal dagaal weyni kama dhicin kaliya ciidamada Maamulka degmada ayay ahaayeen oo ku howlanaa howlgalo ay kula dagaalamayaan kooxaha amni 0darada ka shaqeeya” ayuu yiri Yuusuf Kabaale
Iska hor imaadkaani u dhexeeya ciidamada Dowlada ee qaab beeleedka ku dhisan ayaa noqday mid soo noq noqday iyadoo waxa inta badan la isku qabtana ay tahay sidii lookala riixan lahaa meelaha jabboontiyada ay dhigtaan maleeshiyop beeleedyadaasi huwan magaca Dowlada KMG.